Ny orinasa Rolex dia iray amin'ireo marika famantarana famantarana fanta-daza indrindra ankehitriny, raha tsy ny malaza indrindra. Mbola tanora anefa ny orinasa Rolex raha ampitahaina amin'ireo mpanamboatra famantaranandro sy famantaranandro am-paosy maro hafa toa an'i Patek Philippe (naorina tamin'ny 1839), Omega (naorina tamin'ny 1848), Audemars Piguet (naorina tamin'ny 1875) ary ny tantara lava be momba an'i Vacheron Constantin ( naorina tamin'ny 1755).
Rolex dia naorin'i Hans Wilsdorf sy ny zaodahiny Alfred Davis tamin'ny 1905 ho "Wilsdorf sy Davis" tany Londres, izay nanafatra hetsika sy dial Soisa, izay napetrany tao anaty vata fiambenana hamidy any amin'ny fivarotana izay mametraka ny azy manokana. anarana amin'ny dial. Ireny vata fiambenana tany am-boalohany ireny dia misy tombo-kase "W&D" ary izy ireo no endrika voalohany amin'ny fiambenana avy amin'ity orinasa ity. Fanaon'izy ireo koa ny nampiasa fefy namboarin'ny orinasa Dennison nandritra io vanim-potoana io.
Rolex taloha nanao sonia "W & D" ho an'ny "Wilsdorf sy Davis".
Ny mpamatsy hetsika lehibe dia i Hermann Aegler ary i Wilsdorf dia nitady hatrany hamorona hetsika kely sy mahazo aina tsara hanaovana eo amin'ny hatotanana - hatramin'izao fotoana izao dia mbola novokarina ny famantaranandro am-paosy ary maro tamin'ireo famantaranandro tany am-boalohany dia hetsika sy tranga fiambenana paosy fotsiny. niova ho entina eo amin'ny hato-tanana - ary hetsika avo lenta afaka mitazona ny fahitsiana tonga lafatra - tokoa tamin'ny 1910 dia nandefa ny hetsika voalohany ho any Soisa izy ireo ary nahazo ny laharana voalohany amin'ny chronometer eran'izao tontolo izao ho an'ny famantaranandro.
MANINONA NO ANARANA ROLEX ?[hanova | hanova ny fango]
Ny ady hevitra efa nisy nandritra ny am-polony taona maro dia ny niavian'ny anarana Rolex. Maro ny teoria mivezivezy, ary iray amin'ireo mahazatra indrindra ny hoe ny anarana dia avy amin'ny teny hoe "HoROLogical Excellence" na avy amin'i Alfred Davis, izay tia fiara sy ny kalitao ary ny fomban'ny Rolls Royces tamin'izany fotoana izany. Tiany hatomboka amin'ny Rol ny anaran'ny orinasa ary hifarana amin'ny teny hoe Timex, izay manondro famantaranandro tamin'izany fotoana izany, ary nampiarahina tamin'ireo teny roa ireo.
Ny antony iray hafa dia ny nakan'i Hans Wilsdorf ny anarana avy amin'ny fitambaran'ny teny espaniola - relojes excelentes (famantaranandro tena tsara) ary nanova tsotra izao ny teny. Hower, ny tena niavian'io anarana malaza ankehitriny io, "Rolex", dia maneso satria tsy misy dikany mihitsy izany.
Na izany aza, ao amin'ny boky "The best of time, Rolex wristwatches" nosoratan'i James M Dowling sy Jeffrey P Hess, dia voalaza fa avy amin'ny mpamorona ny fakan-tsary Kodak, Mr. George Eastman, izay nanao patanty ny anarana Kodak tamin'ny taona 1884, io anarana io. satria ilay anarana... "tsy maintsy fohy, mahery, tsy azo diso tsipelina hanimba ny maha-izy azy, ary, mba hanomezana fahafaham-po ny lalàna momba ny marika dia tsy misy dikany izany".
Ny azo antoka dia ny anarana Rolex dia nisoratra anarana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 1915. Na inona na inona niandohan'io anarana io, Rolex dia orinasa iray namela marika teo amin'ny tontolon'ny famantaranandro.
Tsy niandry ela i Hans Wilsdorf vao nahatsapa ny hasarobidin'ny fiaraha-miasa amin'i Aegler sy ny famokarana famantaranandro avo lenta any Soisa. Tamin'ny 1919, nafindrany tany Soisa ny orinasany, namorona ny orinasa Rolex Watch. Io anarana io dia novana ho Montres Rolex, SA, ary farany lasa Rolex, SA.
ROLEX AO AMIN'NY INONAVATION INITIATIVE[hanova | hanova ny fango]
Wilsdorf sy Davis dia tsy mionona amin'ny maha-orinasa famantaranandro hafa fotsiny. Tao anatin'ny 20 taona, Rolex dia nahatratra 20 mahery ny firaketana an'izao tontolo izao.
Anisan'ireo firaketana ireo ny raharaha Rolex Oyster malaza ankehitriny, famantaranandro tena tantera-drano voalohany eran'izao tontolo izao noho ny lamosina sy satroboninahitra - fanavaozana mbola ampiasaina ankehitriny -, ny famantaranandro mihodinkodina maharitra mandrakizay (automatique), izay lasa tena malaza. "bubble back" tadiavina.
Rolex ihany koa no namorona ny famantaranandro tsy tantera-drano voalohany nahatratra ny halalin'ny 330 metatra, maodely manokana izay nidina hatramin'ny 11,000 metatra, ny Milgauss izay naorina hifehezana ny sahan'andriamby matanjaka toy ny hita any amin'ny laboratoara siantifika, tobin-jiro, sns.
Rolex dia nanohy ny fiezahana ho amin'ny fahalavorariana ary manankarena tokoa ny tantaran'i Rolex ka ity lahatsoratra ity dia manaratsy ny tendron'ilay lasa vongan-dranomandry lehibe amin'ny orinasa famantaranandro mahafinaritra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Rolex&oldid=1043354"
Voaova farany tamin'ny 28 Janoary 2022 amin'ny 13:04 ity pejy ity.